Ambatondrazaka : 40 taona niasana ny Alliance française | NewsMada
Ambatondrazaka : 40 taona niasana ny Alliance française
Be ny asa vita fa tsy vitsy ihany koa ireo mbola miandry ! Nisongadina io nandritra ny fanamarihana ny faha-40 taona niasan’ny Alliance française ao Ambatondrazaka. Fantatra fa efitra fianarana telo no nohajarian’ny komity tarihin-dRafaralahizaka Arindranto Andriamialisoa sy i Anaïs Bonnet tale amperinasan’ny Alliance française Ambatondrazaka.
Nisongadina tamin’ny lanonana fankalazana ny faha-40 taona ihany koa ny soa azo avy amin’ny fisian’ny Alliance française. Notsiahivina fa anisan’izany ny fisian’ny fianarana ao amin’izy ireny. Eken’ny fanjakana ny diplaoma omena ka afaka hisondrotana eo amin’ny asa atao.
Nambaran’ny tompon’andraikitra fa toerana afaka manetsika ny mponina ao Ambaton- drazaka ihany koa ny Alliance française satria, saika hita ao aminy avokoa ireo tolotra sahaza ny sokajin-taona rehetra. Ao ireo lalao ho an’ny ankizy. Ny fifaninanan-kira, fijerena tahirin-kevitra, sns.
Fantatra fa na maro aza ireo tia mampiasa sy tia manandrana miteny ny fiteny frantsay ao Ambatondrazaka, mbola betsaka ihany ireo tsy manana finiavana hiditra ho mpikambana ao amin’ity ivontoerana ity. Ilana fanentanana izany, raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra.